महिला प्रहरीको तर्फबाट आस्थालाई पत्र : बहिनी तिमीले मलाई डन्ठेनी भन्दा जमातले तिमीलाई डंंकेनी भन्यो - Himali Patrika
महिला प्रहरीको तर्फबाट आस्थालाई पत्र : बहिनी तिमीले मलाई डन्ठेनी भन्दा जमातले तिमीलाई डंंकेनी भन्यो
हिमाली पत्रिका ४ माघ २०७६, 10:47 am
बैनी, गाह्रो छ- तिमीलाई पनि हामीलाई पनि !
तिमीले मलाई ‘डन्ठिनी’ भन्यौ, हेर त, तिमीलाई ‘डंकिनी’ भन्ने अर्को जमात तयार भइसक्यो ! गाह्रो छ नि बैनी- सबथोक सहन अनि सबथोक झेल्न !
थाहा छ बैनी? तिमी स्टेज चढिरहेको बेला उन्मत्त भिड सम्हाल्ने केही ‘डन्ठिनी’ हरू तिमीसँग फोटो मात्र खिच्न पाए आफ्नो जीवनको एक हिस्सा सफल भएको महसुस गर्छन् !
सोंच त तिमी र म दुवै छोरी हौँ । दुवै आमा पनि हौँ । आमाले जे सिकायो सन्तानले त्यही सिक्ने हो । हेर त- तिमीले बोलेका शब्दमा तिमीले माफी मागिसक्दा पनि एउटा ठुलो जमातले ‘डन्ठिनी’ लाई ठिकै गर्यौ भनिरहेका छन् ! के सिक्यो जगतले ?
उक्त चिठ्ठी लेखक तथा कवि हेमन्त गिरीले लेखेका हुन् । एभरेष्टपाटीमा प्रकासित सामाग्री हामीले साभार गरेका हौं ।